Imithi "i-Prednisolone" ifakwe esigabeni se-synthetic glucocorticosteroids, i-analog ene-hydrogen e-hydrogen. Lesi sidakamizwa sinomsebenzi wokulwa nokugula, umzimba wokuzivikela, wokulwa nokuvuvukala. Uma uphonywe, umuthi unamathele kakhulu. Ngesikhathi samahora amabili, okuqukethwe kwe-agent e-plasma kufinyelela ezingeni eliphezulu kakhulu. I-metabolism iyenzeka ikakhulukazi esibindi futhi ingxenye yesistimu yezinso. Ukuhoxiswa komzimba kwenziwa ngomchamo. Isidakamizwa sitholakala ngesamba esincane ebisi lwebele, singena emkhawulweni we-placental.
Umuthi "Prednisolone" (amaphilisi). Imiyalo yokusetshenziswa. Izinkomba
Imithi ishiwo i-rheumatic fever, i-chorea encane, ikhadi le-rheumatic. I-agent iyanconywa ukuthi i-pathologies ibe izicubu ezihambisanayo zesimo se-systemic: nge-dermatomyositis, i- nodular periarteritis, i- scleroderma, ne-lupus erythematosus. Izinkomba zibandakanya ukuchotshozeka okuningi, izinqubo zokuvuvukala emagcekeni enkambo engapheli futhi enzima. Ikhambi liphinde linikezwe izifo ezifana ne-epicondylitis, synovitis, bursitis, Still's syndrome, i-osteoarthritis (i-post-traumatic including), i- periarthritis ye-humeropathy, i- psoriatic, i-juvenile, i-gouty ne-rheumatoid arthritis, i- anondlosing spondylitis. Imithi "i-Prednisolone" (amaphilisi) inconywa ngesimo se-asthmatic, i- asthma ye-bronchial, i-pathologies yangaphakathi yamaphaphu (i-sarcoidosis ye- 2-3 degrees, i-fibrosis, i-alveolitis enamandla), umdlavuza wamaphaphu. Isidakamizwa sinqunyelwe ukufisa (ngokuhambisana nokwelashwa okuqondile), i-Leffler's eosinophilic pneumonia , iberylliosis, isifo sofuba (ngokuhambisana nokwelashwa okuqondile), hyperplasia, ukungakwazi ukusebenza okuyisisekelo kanye nokweqa okuyisisekelo kwizinhlayiya ezingenasisindo (kubandakanya lezi zizwe ngemuva kokususwa kwazo). Kulezi zibonakaliso zemithi ye-drug "Prednisolone" (amaphilisi) (ukubuyekezwa kochwepheshe kuqinisekisa lokhu) kumele kufaka phakathi i-autoimmune pathologies, izimo ze-hypoglycemic. Futhi, izidakamizwa zenzelwe isifo sofuba, izifo ezithathelwanayo zohlobo oluyingozi futhi olungapheliyo, izilonda ezivuthayo zesimiso sokugaya, i- nephrotic syndrome, izifo zengxube kanye ne-hematopoiesis. Imithi "Prednisolone" (amaphilisi) imfundo yokusetshenziswa iphakamisa isikhumba se-pathologies se-autoimmune neminye imvelo. Ngokuyinhloko, imithi ibelwe i-exfoliative, i-herpetiform bullous dermatitis, i-pemphigus, i-Lyell syndrome, i-psoriasis, i-eczema.
Isidakamizwa sinqunywe i-hypercalcemia nge-pathologies engokwemvelo, izifo zamehlo, i-edema yobuchopho ngemva kokuhlukumezeka, i-postradiation, isikhathi se-postoperative. Isidakamizwa sinconywa ukuvimbela nokuqeda umuzwa wezinambuzane noma ukuhlanza emhlabathini we-cytostatic therapy, kanye nokuvimbela ukwenqatshwa kokufakelwa.
Imithi "Prednisolone" (amaphilisi) imfundo yokusetshenziswa iphakamisa ukungena, ngaphandle kokuhlafuna. Njengendlela yokwelashwa esikhundleni, lesi sidakamizwa sinqunywe u-20-30 mg. Amanani asekela - 5-10 mg. Kuye ngesimo sesiguli, inani lokuqala lomuthi lingaba lisuka ku-15 kuya ku-100 mg. Isidakamizwa esithi "Prednisolone" (amaphilisi) wezingane sishicilelwe 1-2 mg / kg. Inani elitholwe lihlukaniswe libe yizincomo ezine kuya kweziyisithupha. Umthamo wesondlo ngosuku u-300-600 mcg / kg.
Isidakamizwa "Clarithromycin". Imiyalo yokusetshenziswa
I-ursodeoxycholic acid: imiyalo yokusetshenziswa, i-analogues, izibuyekezo
Kuthiwani uma u-traumas wokuzalwa eqoka noma akhetha izindlela "I-Pantogame" yabantwana abasha?
GML emkhonweni. Ixhuma imikhono ukuze umqhubi crimp
Kwethulwa iPad mini: ezibekiweko kanye amakhono igajethi
Yenza Christmas sezimbali bhá futhi zizinhle of ushokoledi ngezandla zabo
Iphutha 404: indlela yokulungisa? Iphutha 404: "Ikhasi alitholakali"